platinum mines in zimbabwe platinum mines in zimbabwe
Nov 14, 2020· Bravura Holdings Ltd., owned by Nigerian billionaire Benedict Peters, has $1 billion available for the development of a platinum mine in Zimbabwe, its country manager said.. The 3,000 hectare (7,413-acre) concession where it plans to dig the mine is in Selous, 80 kilometers (50 miles) south of Zimbabwe’s capital Harare and close to existing platinum mines.
Nov 11, 2020· While Zimbabwe has the world’s third-largest platinum group metal reserves, investors have been deterred by frequent changes to mining laws and currency policies. In addition to Bravura, Russian and Cypriot companies have announced plans to invest in Zimbabwean platinum mines.
Dec 09, 2020· Great Dyke Investments, a Russian-backed project planning to build Zimbabwe’s biggest platinum mine, has sold a 4.4% stake to Fossil Mines Ltd. as Covid-19 disrupted fundraising for the venture. Fossil, owned by Zimbabwe’s Obey Chimuka, will invest $30 million in the Darwendale project, through a combination of cash and services, including for engineering, procurement and construction.
Bloomberg — Great Dyke Investments, a Russian-backed project planning to build Zimbabwe’s biggest platinum mine, has sold a 4.4% stake to Fossil Mines Ltd. as Covid-19 disrupted fundraising for the venture. Fossil, owned by Zimbabwe’s Obey Chimuka, will invest $30 million in the Darwendale project, through a combination of cash and
Coronavirus disrupts funding for one of Zimbabwe's biggest
Great Dyke Investments, a Russian-backed project planning to build Zimbabwe’s biggest platinum mine, has sold a 4.4% stake to Fossil Mines Ltd. as Covid-19 disrupted fundraising for the venture. Fossil, owned by Zimbabwe’s Obey Chimuka, will invest US$30 million in the Darwendale project, through a combination of cash and services
>> Next:Jaw Crusher Mining 58zb5j Stone